डा.गोविन्द केसीले जुम्लामा सुरु गरे १९ औ सत्याग्रह
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको विभिन्न माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा अनसन सुरु गरेका छन् । उनको जुम्लाको चन्दननाथ -६ रानिचौरमा रहेको वाविरा मन्दिरमा १९ औ सत्याग्रह सुरु भएको हो । नेपालीहरुको निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पचुहको सुनिश्चितता र वली सरकारको लु’टतन्त्र तानाशाही तन्त्र विरुद्ध जुम्लामा १९ औ सत्याग्रह सुरु गरेको डा. गोविन्द केसीले वताएका छन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एम.वि.वि.एस लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने र स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल पदान गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्टानमा पठन पाठन सुरु गरिनुपर्ने, प्रदेश नं २ र गण्डकी प्रदश तथा डोटी, डेडेलधुरा, उदयपुर र इलाम, पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल प्रक्रिया अघि बढाइयोस् भन्ने मागहरु रहेका छन् ।
केसीले महामारीको समयमा नागरिक भोकभोकै पर्दा पनि राज्य सञ्चालक र उनीहरुको निकटका व्यक्तिहरु भ्र’ष्टाचारमा लिप्त रहेको आ’रोप लगाएका छन् । आफुसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संसोधन गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेर डा. केसीले अनसन सुरु गरेका हन् ।
उनले १६ औ सत्याग्रह पनि जुम्लामा गरेका थिए । पहिलाको सत्याग्रहका वेला गरिएका सम्झौताहरु अहिले सम्म पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले आफु अनसन वस्न वाध्य भएको उनको भनाइ छ ।